GRC imitation cave stone-GRC Imitation stone-Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co., Ltd.
GRC High-end ထုံးစံ
GRG Acoustic ဘုတ်အဖွဲ့
GRC Flame-retared ဗဓေလသစ် panel ကို
TCP အနုပညာခြင်း simulation
Prefabricated စာအိတ် panel ကို
သင်ဒီမှာပါ : မူလစာမျက်နှာ>ကုန်ပစ္စည်း>GRC High-end ထုံးစံ>GRC တုပကျောက်
မူလအစရာ: Jiangsu, Nanjing, China
မော်ဒယ်နံပါတ်: GRC အတုဂူကျောက်
GRC (Glass Fiber Re Informed Concrete) ကိုလည်း GRC ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏တရုတ်အမည်မှာဖန်မျှင်အမျှင်ကွန်ကရစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါင်းစပ်ထားသောပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးဘိလပ်မြေအင်္ဂတေအားအခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဆေးဆိုးခြင်းစသည်တို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် GRC ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းသည်အလွန်ထူးခြားသည်။ ပြင်ဆင်ထားသောဖန်မျှင်အမျှင်ကွန်ကရစ်ကိုချောမွေ့သောဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်ပက်ဖျန်းပေးသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်ကိုအလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်း၊ အရှင်ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးသည်သာမန်ကွန်ကရစ်ရောစပ်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ကွာခြားသည်။ ဥရောပနှင့်အမေရိကတို့တွင်အလွှာတစ်မျိုး GFRC စာရွက်ကိုအပြင်ဘက်နံရံအလှဆင်ဘုတ်အဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
ကွေးအချိုးကျအဆုံးစွန်အစွမ်းသတ္တိ / MPa ကွေး ပျမ်းမျှတန်ဖိုး 7
ကွေးနိုင်မှုစွမ်းအား / MPa ပျမ်းမျှတန်ဖိုး 18
သက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိ / kJ / M2 8
Volume သိပ်သည်းဆ (ခြောက်သွေ့) / g / cm3 1.8
ခုခံအေးခဲ အေးခဲနေသောအရည်ပျော်စေသောသံသရာ ၂၅ ခုပြီးနောက်ရေစိမ်ခြင်း၊ ယိုယွင်းခြင်းနှင့်အခြားပျက်စီးခြင်းဖြစ်ရပ်များမရှိပါ။
1. မြင့်မားသောပလပ်စတစ်။ ထုတ်ကုန်သည်မော်ဒယ်လ်ကိုတိကျမှန်ကန်စွာနေရာချနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမည်သည့်အရောင်၊ မော်ဒယ်လ်သို့မဟုတ်အရောင်မဆိုအတွက်ဗိသုကာအလှဆင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အသွင်အပြင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဖော်ပြနိုင်ရန်ဒီဂျစ်တယ်သုံးဖက်မြင်မြေပြင်နည်းပညာကိုအပြည့်အဝအသုံးချပါ။
၂ ။ ပြည့်စုံသောကာကွယ်မှုစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ရေစိုခံသောလုပ်ဆောင်မှုကိုသေချာစေပြီး၊ ဗိသုကာအသွင်အပြင်အပြင်အဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်အညစ်အကြေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
၃ ။ မြင့်မားသော elastic PVA ဖိုင်ဘာကို GRC ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုအလွှာအတွက်ဖြည့်စွက်အားဖြည့်ပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ PP fiber သည်မျက်နှာပြင်အလွှာ၏ microcracking ခုခံမှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ထုတ်ကုန်များ၏ကြာရှည်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အဆောက်အ ဦး များ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။
4. အလင်းနှင့်ပါးလွှာသောနံရံ။ တီထွင်မှုသည်ကြီးမားသောပြားများနှင့်ပါးလွှာသောနံရံများ၏လက္ခဏာများကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ အဆောက်အအုံများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်၊ ထုတ်ကုန်များကိုအထပ်မြင့်အဆောက်အ ဦး များ၏အပြင်ဘက်နံရံများတွင်အသုံးချနိုင်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံပုံစံများကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အထင်ကရခြုံငုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၅။ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း - GRC သည်အခြားအကာအရံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်စွမ်းအင်နည်းသည်။ ဂျပန်ပညာရှင်များသည် GRC wallboard နှင့်ခိုင်ခံ့သောကွန်ကရစ်အုတ်နံရံများအကြားကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်ပြုခဲ့ကြပြီး GRC wallboard အသုံးပြုခြင်းသည်ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု ၃၀% ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
GRC Wormhole အကျိုးသက်ရောက်မှု
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Nanjing BeiLiDa New Materials System Engineering Co. , Ltd.